ကောင်မလေးတွေ ကြွေကျသွားမယ့် လမ်းဆုံထောင့်က ကော်ဖီဆိုင်ဆန်းလေး "Now and Then Cafe"
ကောင်မလေးတွေ ကြွေကျသွားမယ့် လမ်းဆုံထောင့်က ကော်ဖီဆိုင်ဆန်းလေး “Now and Then Cafe”
23 May 2018 . 6:10 PM
ခေတ်ကြီးကိုက Social Media ခေတ်ဆိုတော့ ကိုယ်တွေအစားသမားတွေဆိုတာလည်း ဘာလေးစားရစားရ၊ ဘယ်လေးသွားရ သွားရ၊ ဆိုင်လှလှလေး၊ အစားအစာပုံလှလှလေးတွေ့တာနဲ့ ဓါတ်ဖမ်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် Account တွေမှာ တင်ကြတာမျိုးမလား?
အဲ့လို ဓါတ်လည်းဖမ်း၊ တစ်နေကုန် Wifi လေးနဲ့ သာသာယာယာလည်း ငြိမ့်နိုင်မယ့် ဘိုဆန်ဆန် ဆိုင်လှလှလေးတစ်ဆိုင် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လမ်းဆုံလမ်းထောင့်လေးမှာ ဖွင့်ထားတာ သိပြီးကြပြီလား?
ဘိုဆန်ဆန်ဆိုတာ ဒီဆိုင်လေးက ထူးထူးဆန်းဆန်းလမ်းဆုံထောင့်လေးမှာ ထီးထီးလေး သူတစ်ဆိုင်ပဲ တစ်စောင်းလေး ဆောက်ထားတာ။ တစ်ဆိုင်လုံးကို မှန်အကြည်လေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတယ်။ Bar လို ထိုင်ခုံတန်းလေးတွေရှိတယ်။ တစ်ဆိုင်လုံးက အရမ်း ဘိုဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားက ကော်ဖီဆိုင်လေးရောက်နေသလို Feeling လေး။ လမ်းမတန်းပေါ်ဆိုတော့ ကားရပ်ရတော့ ခက်မယ်။
နာမည်လေးက “Now and Then Cafe” တဲ့။ ရန်ကင်း မှာရှိတယ်။ သူ့ဆီမှာ Coffee ၊ Soda ၊ Smoothie ၊ Toast တွေ၊ Italian Food လေးတွေရတယ်။ Honey Toast နာမည်ကြီးတယ်တဲ့။ ကိုယ်ကတော့ ကော်ဖီသမားမဟုတ်လို့ Lime Soda လေးနဲ့ Cheese Cake လေး မှာခဲ့တယ်။
Lime Soda ကတော့ သောက်လို့ သိပ်မပြေ။ အရသာမရှိသလိုပဲ။ Cheese Cake လေးကတော့ အီစိမ့် ကိုယ့်အကြိုက် ကွက်တိ။ ဈေးလေးတွေက Soda က ၂၅၀၀။ Cheese Cake က ၂၈၀၀ လားပဲ။
ဈေးတော့ နည်းနည်းကြီးတယ်။ အရသာတွေကတော့ သိပ်အားမရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေစုထိုင်လို့ကောင်းတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ကိတ်လေးတွေလည်း မှာလို့ရတယ်။
ဆိုင်ရဲ့ နေရာအနှံ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့လှလို့ ကိုယ့်လို မိန်းကလေးတွေဆို ပျော်လိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။ မှန်ဆိုင်လေးဆိုတော့ နေ့ခင်းဘက်ဆို နေကျလောက်မယ်။ ညနေပိုင်း ၃,၄ နာရီလောက်၊ ဒါမှမဟုတ် မိုးအုံ့တဲ့ ရာသီဥတုလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ တစ်နေကုန် ကော်ဖီခွက်လေး၊ ကိတ်လေးတွေနဲ့ မိုးရေစက်လေးကြည့်ရင်း ထိုင်ငြိမ့်ပါလိမ့်။
နောက်ဒီဆိုင်လေးကို အရမ်းကြိုက်မိတဲ့တစ်ချက်က Wifi ပဲ။ လိုင်းအရမ်းကောင်းလို့ အေးဆေး ကြည့်ချင်တာလေးတွေ သာသာယာယာထိုင်ရင်း ကြည့်လို့ရတယ်။ ဆိုင်လေးက လူရှင်းတဲ့အချိန်တော့ ထိုင်ရတာ နားအေးပါးအေးနဲ့ နိုင်ငံခြားရောက်သွားသလိုပဲ။
လိပ်စာက သစ္စာလမ်းနဲ့ မိုးကောင်းလမ်းကြား၊ ရန်ကင်း မှာပါ။ မနက် ၉ ကနေ ည ၈ နာရီ အထိဖွင့်တယ်။ မိုးအုံ့နေချိန်လေးတွေ သိပ်ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးမို့ လူရှင်းတုန်း မြန်မြန်ပြေးသွားဖို့ အခရာက ညွှန်ပေးလိုက်တယ်နော်။
ကောငျမလေးတှေ ကွှကေသြှားမယျ့ လမျးဆုံထောငျ့က ကျောဖီဆိုငျဆနျးလေး “Now and Then Cafe”
ခတျေကွီးကိုက Social Media ခတျေဆိုတော့ ကိုယျတှအေစားသမားတှဆေိုတာလညျး ဘာလေးစားရစားရ၊ ဘယျလေးသှားရ သှားရ၊ ဆိုငျလှလှလေး၊ အစားအစာပုံလှလှလေးတှတေ့ာနဲ့ ဓါတျဖမျးပွီး ကိုယျ့ကိုယျပိုငျ Account တှမှော တငျကွတာမြိုးမလား?
အဲ့လို ဓါတျလညျးဖမျး၊ တဈနကေုနျ Wifi လေးနဲ့ သာသာယာယာလညျး ငွိမျ့နိုငျမယျ့ ဘိုဆနျဆနျ ဆိုငျလှလှလေးတဈဆိုငျ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ လမျးဆုံလမျးထောငျ့လေးမှာ ဖှငျ့ထားတာ သိပွီးကွပွီလား?
ဘိုဆနျဆနျဆိုတာ ဒီဆိုငျလေးက ထူးထူးဆနျးဆနျးလမျးဆုံထောငျ့လေးမှာ ထီးထီးလေး သူတဈဆိုငျပဲ တဈစောငျးလေး ဆောကျထားတာ။ တဈဆိုငျလုံးကို မှနျအကွညျလေးတှနေဲ့ဆောကျထားတယျ။ Bar လို ထိုငျခုံတနျးလေးတှရှေိတယျ။ တဈဆိုငျလုံးက အရမျး ဘိုဆနျပွီး ခဈြစရာကောငျးတယျ။ နိုငျငံခွားက ကျောဖီဆိုငျလေးရောကျနသေလို Feeling လေး။ လမျးမတနျးပျေါဆိုတော့ ကားရပျရတော့ ခကျမယျ။
နာမညျလေးက “Now and Then Cafe” တဲ့။ တောငျဥက်ကလာမှာရှိတယျ။ သူ့ဆီမှာ Coffee ၊ Soda ၊ Smoothie ၊ Toast တှေ၊ Italian Food လေးတှရေတယျ။ Honey Toast နာမညျကွီးတယျတဲ့။ ကိုယျကတော့ ကျောဖီသမားမဟုတျလို့ Lime Soda လေးနဲ့ Cheese Cake လေး မှာခဲ့တယျ။
Lime Soda ကတော့ သောကျလို့ သိပျမပွေ။ အရသာမရှိသလိုပဲ။ Cheese Cake လေးကတော့ အီစိမျ့ ကိုယျ့အကွိုကျ ကှကျတိ။ ဈေးလေးတှကေ Soda က ၂၅၀၀။ Cheese Cake က ၂၈၀၀ လားပဲ။
ဈေးတော့ နညျးနညျးကွီးတယျ။ အရသာတှကေတော့ သိပျအားမရသေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူငယျခငျြးတှစေုထိုငျလို့ကောငျးတော့ မဆိုးဘူးပွောရမယျ။ ကိတျလေးတှလေညျး မှာလို့ရတယျ။
ဆိုငျရဲ့ နရောအနှံ့ ဓါတျပုံရိုကျလို့လှလို့ ကိုယျ့လို မိနျးကလေးတှဆေို ပြျောလိုကျမယျ့ဖွဈခွငျး။ မှနျဆိုငျလေးဆိုတော့ နခေ့ငျးဘကျဆို နကေလြောကျမယျ။ ညနပေိုငျး ၃,၄ နာရီလောကျ၊ ဒါမှမဟုတျ မိုးအုံ့တဲ့ ရာသီဥတုလေးတှမှောဆိုရငျတော့ တဈနကေုနျ ကျောဖီခှကျလေး၊ ကိတျလေးတှနေဲ့ မိုးရစေကျလေးကွညျ့ရငျး ထိုငျငွိမျ့ပါလိမျ့။
နောကျဒီဆိုငျလေးကို အရမျးကွိုကျမိတဲ့တဈခကျြက Wifi ပဲ။ လိုငျးအရမျးကောငျးလို့ အေးဆေး ကွညျ့ခငျြတာလေးတှေ သာသာယာယာထိုငျရငျး ကွညျ့လို့ရတယျ။ ဆိုငျလေးက လူရှငျးတဲ့အခြိနျတော့ ထိုငျရတာ နားအေးပါးအေးနဲ့ နိုငျငံခွားရောကျသှားသလိုပဲ။
လိပျစာက သစ်စာလမျးနဲ့ မိုးကောငျးလမျးကွား၊ ရနျကငျးမှာပါ။ မနကျ ၉ ကနေ ည ၈ နာရီ အထိဖှငျ့တယျ။ မိုးအုံ့နခြေိနျလေးတှေ သိပျထိုငျလို့ကောငျးတဲ့ဆိုငျလေးမို့ လူရှငျးတုနျး မွနျမွနျပွေးသှားဖို့ အခရာက ညှနျပေးလိုကျတယျနျော။